प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रा’जीनामा दिदै , देउवा’लाई प्रधानमन्त्री बनाउने संकेत ? – News543Online
February 24, 2021 adminLeaveaComment on प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रा’जीनामा दिदै , देउवा’लाई प्रधानमन्त्री बनाउने संकेत ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रा’जीनामा ग’र्न तयार भए’का छन् । अन्य दलहरुबीच छलफल गरेर ओलीले रा’जीनामा ग’र्ने तया’री गरे’को बुझिए’को छ । बुधबार बालुवाटार’मा बसेको ओली निकट स्थायी समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा पनि ओली निकट नेकपाका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पनि सो कुरालाई सं’केत गरेका छन् ।
‘दलहरु’सँग परा’मर्श र सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्री’ले नि’र्णय गर्नुहुन्छ । मुलुक’लाई अ’न्यो’ल’मा रा’ख्नु हु’दैन भन्ने भनाई हो’ प्रवक्ता ज्ञवालीको भनाई छ । ओली पक्षको स्थायी समिति बैठक बिहीबार पनि बस्नेछ ।
सर्वोच्च अदालत’ले प्र’तिनिधि’सभा वि’घट’न’लाई ब’दर गरेलगत्तै नयाँ सरकार गठनका लागि नेताहरुबीच गृहकार्य सुरु भएको छ । बुधबार नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षका अध्यक्षद्धय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल तथा काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच नयाँ सरकार ग’ठन’बारे प्रारम्भिक चरण’को छ’लफल भए’को हो ।
देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा तीन नेताबीच भ’एको छलफलमा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले सभापति देउवा’लाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव ‘अफर’ गरे’का हुन् । नेकपा उच्च स्रोतकाअनुसार तीन नेताबीच झण्डै ४५ मिनेट भएको छलफलमा प्रचण्ड र नेपालले गरेको प्रस्तावप्रति देउवा स’कारात्म’क ब’न्दै दल’भित्र छलफल गरेर निर्णय दिने बताएका थिए ।
प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा ‘जुगल’ले नेताहरुबीचको छलफल स’का’रा’त्म’क भए’को भन्दै समझदारी’बाटै अघि बढ्न ने’ताहरु सहमत भएको आफु’ले पाएको बताए । ‘छलफल भयो । नेताहरु समझदारी’बाटै अघि बढ्ने कुरामा सहमत हुनुभएको बुझिएको छ’ सापकोटाले जानकारी दिए ।
यसअघि प्रचण्ड र माधव दुवै नेताले आफुहरु प्रधानमन्त्री न’बन्ने भन्दै देउवालाई अगाडि सारेको बताएका थिए । ‘बुधबारको छलफलमा पनि उहाँहरु (प्रचण्ड–माधव) ले सोही कुरा प्रस्तावका रुपमा अगाडि सार्नुभयो । त्यसमा सभापति ज्यु पनि सका’रात्मक हुनुहुन्छ’ देउवा निकट स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय दिन्छु भन्नुभएको छ ।’ रातोपाटी बाट